Vaovao - Tetikasa Metro Metro Line 2
Ny làlana dia manana halavirana lava 21 kilometatra avo lenta ary misy tobin-tsarimihetsika 16 misy biriky malalaka, hahitana fandrakofana sy fiarovana bebe kokoa amin'ny vanim-potoana orana. Ankoatr'izay dia misy takelaka aliminioma sy skylights polycarbonate hiasa ho mpitsitsy angovo, noho ny fampiasana jiro voajanahary. Tetikasa azo antoka izy io, satria manana fomba fanao fanaraha-maso manokana mandritra ny diany, mampihatra ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy.
Ny tetikasa dia ohatra iray amin'ny fotodrafitrasa ara-tsosialy. Nandritra ny fananganana azy dia mpiasa maherin'ny 6000 no nandray anjara, ka ny 70% mahery dia mponina ao amin'ireo vondrom-piarahamonina manodidina ny asa. Betsaka ny vondrom-piarahamonina 98 sy ivon-toerana 48 fanabeazana napetraka nandritra ny tetikasa no nahazo tombony tamin'ity tetikasa ity, ka nanatsara ny kalitaon'ny olona maherin'ny 500.000 tany amin'ny faritra atsinanan'i Panama.
Natao ho fitaterana mpandeha mihoatra ny 16000 isan'ora sy lalana ny fotodrafitrasa, miaraka amin'ny 35 minitra ny dia. Izy io dia natao ho an'ny fahaizan'ny mpandeha 40,000 fara-fahakeliny mandritra ny ora faratampony ary natao ho an'ny olona manana fahaizana mihena.
Ny fifanarahana ho an'ny fananganana ny andalana 2 an'ny Panama Metro dia misy ny serivisy enti-miasa amin'ny famolavolana, ny asa sivily, ny fametrahana ny zotra, ny famatsiana ary ny fametrahana ny rafitry ny lalamby feno, ao anatin'izany ny stock stock sy ny fanendrena voalohany ny tsipika.
Ireo sanganasa dia ahitana gara 16 sy zotra 21 kilometatra avo an'ny lalamby, mampitohy ireo gara avy ao amin'ny distrikan'i San Miguelito ka hatramin'ny 24 de Diciembre. Ahitana typology fitoviana telo hafa:
Havoana afovoany, garazy ary gara manokana. Ny famolavolana voalohany dia mahazaka mpandeha 16000 isan'ora isaky ny lalana. Ity tetik'asa ity dia handray soa olona sahabo ho antsasaky ny tapitrisa ao amin'ny distrikan'i Panama atsinanana.
Ace dia manome ireo tetik'asa ireo: nomenay avokoa ireo gara miisa 17 mifandraika amin'ny vatan-kazo vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny habetsany mihoatra ny 8.000 metatra liner metatra ny halavany. Ny tetik'asa totalin'ny tetikasa dia mihoatra ny USD800,000.